University of Ulm - Fianarana an-tany hafa in alemà oniversite
Aza adino ny midinika University of Ulm
Misoratra anarana ao amin'ny University of Ulm
Ny University of Ulm dia araky ny vanimpotoana ny fahasivy ao Baden-Wuerttemberg. Ny hevitra voalohany ny mpamorona ny oniversite any Ulm hiverina ho any amin'ny 50 ny. In 1959, ny fikarohana vondrona “University of Ulm” no natao, izay namokatra ny memorandum amin'ny mpanorina ny oniversite tamin'ny volana Martsa ny 1961. Noho ny fifaninanana eo amin'ny tanànan'i Constance sy Ulm ao amin'ny dingana voalohany, ny hevitra ny fanorenana oniversite tsirairay avy amin'ny tanàna roa nahazo lazany. A-dehibe mahatonga mitarika ny fanapahan-kevitra izao dia ny hoe Constance no misy akaikin'ny sisintany federaly. Ny fahafahana ho an'ny asa eo amin'ny sehatry ny fitsaboana, dia tsy ho ampy noho ny tsy fisian'ny iray catchment faritra marary tao amin'ny sisin-tany. Ny hevitra ny mpamorona ny oniversite any Ulm Izany no nahatongavan'i mivaingana kokoa – fa ho amin'ny oniversite miendrika ny fitsaboana sy ny siansa momba ny zavaboary.
Tamin'ny volana Jolay ny 1965, ny fototra komity nanaiky ny “Memorandum amin'ny College ny Fitsaboana sy Siansa Voajanahary in Ulm,” izay ankatoavin'ny ny fanjakan'i Baden-Wuerttemberg ny Filankevitry ny Minisitra tamin'ny Janoary 1966. Roa volana monja tatỳ aoriana, ny “Vonjimaika Lalàm-panorenana ao amin'ny Ulm College ny Fitsaboana sy Siansa Natural” tonga nanan-kery.
Faculty ny Engineering sy solosaina Science
Faculty ny Matematika sy ny Toekarena
Ianao ve mila midinika University of Ulm ? Any fanontaniana, fanehoan-kevitra na hevitra
University of Ulm tamin'ny Map
University of Ulm Hevitra
Miaraha mba hifanakalo hevitra momba ny Oniversiten'i Ulm.
Hanovre Medical School Hanovre